Linux Linux: Akụkọ banyere njem | NwetaLeta | ChrisADR | Site na Linux
ChrisADR | | Nkesa, GNU / Linux
1 Gentoo Linux bụ ...
1.1 Otu ntakịrị nke "M":
1.2 Otu ntakịrị nke "gị":
2 Isi nke mbụ, Ubuntu:
2.1 Nzukọ mbụ:
2.2 Obi mgbawa:
2.3 Ọchịchọ ịmata:
3 Isi nke abụọ, Manjaro:
4 Isi nke atọ, Arch:
5 A ọhụrụ isi, Gentoo:
6 Ezi mmalite:
7 A ngwa ngwa ile Gentoo:
7.1 Inwe obodo na-eme ka mmezi dị mfe:
7.2 Otu obodo na akwụkwọ:
7.3 Nchịkọta na arụmọrụ:
Gentoo Linux bụ ...
Chei! Echere m na ọ dị mkpa ịmalite na obere ozi tupu ị gwa gị ihe gbasara nkesa a bụ mmalite na ndụ Linux m.
Otu ntakịrị nke "M":
Mbụ m ga-amalite site n'ịgwa gị ntakịrị ihe banyere m (ọ bụrụ na ọ naghị enye gị nsogbu, mana ọ bụrụ na ọ dị, ị nwere ike ịwụfu paragraf ole na ole, agaghị m ewe iwe 🙂).
Aha m bụ Christopher, m bụ 24 afọ ma na m na-eji dị iche iche Linux nkesa n'ihi na nanị ihe karịrị 2 afọ. Ọ bụ njem jupụtara n'ọ ofụ (ọ bụ ezie na mgbagwoju anya m ga-ekweta 😛) yana na njem m niile mụtara ọtụtụ ihe.
M na-amụ (Ana m achọ ịgụcha akara m) mmepe ngwanrọ na Lima, Peru. Kemgbe ọrụ m, ahụrụla m asụsụ dị iche iche na ntọala, yana otu ma ọ bụ ọzọ ejiri m ya maka ọrụ nkeonwe.
Enwere m obi ụtọ banyere nchekwa kọmputa, nke ahụ bụ mpaghara nke m na-atụ anya ịzụlite ọkachamara, ọkachasị na nchọpụta ngwangwa.
Site na obere okwu mmeghe a, echere m na enwere karịa karịa, ugbu a ma ọ bụrụ na anyị nwere ike tinye akụkọ ihe mere eme anyị.
Otu ntakịrị nke "gị":
DesdeLinux bụ otu n'ime isi ihe nzukọ maka ndị na-asụ Spanish na-ekesa nkesa dị iche iche. Ma o yikarịrị ka onye ọ bụla na-agụ paragraf ndị a ejirila, jiri ma ọ bụ chọọ iji nkesa Linux. Onye na - eche nche karịa ga - enwe ike iji sistemụ abụọ yana ụdị ọzọ nke sistemụ arụmọrụ ọzọ, ọ ga - esikwu ike kari ka ọ ga - esi na nkesa kesaa ka ọnwa na - aga. Ebe ọ bụla ị nọ ugbu a, ka m kekọrịta ntakịrị akụkọ akụkọ Linux m, ụwa jupụtara na njem, nsogbu na ihe ịga nke ọma.
Dị ka ọtụtụ, ọkachasị ebe a na Latin America, mgbe m bụ nwata, amaghị m na Linux dị adị. Enwere m afọ ojuju mgbe niile na mwepu diski na-aga n'ihu, na-efusi ọsọ ọsọ na ntinye ọ bụla, na-akwụ ụgwọ maka mmezi ọ bụla, na nkenke, otu puku na otu ọnọdụ nke nwere ike ịbụ na anyị niile agabigala oge ụfọdụ.
Isi nke mbụ, Ubuntu:
Ihe a gbanwere mgbe m webatara Ubuntu obere oge tupu amalitere m ịmụ Software Development. M ka na-echeta oge mbụ Ubuntu Live USB bidoro, na ụcha oroma ahụ, akụkụ ahụ, usoro ọhụrụ yana ụzọ "iju" nke na-achọ ngwa m site na ịpị igodo ahụ. Windows
Ekwesịrị m ikweta na ọ bụ ịhụnanya n'anya mbụ, ụwa ọhụrụ nke ohere, ihe ị ga-amụta na enweghị mgbagha ọhụụ ọhụụ ọhụụ gị na ndị otu gị n'enweghị ihe mgbochi. Ma dị ka ịhụnanya niile dị na mberede, ọ dịteghị anya ... Ekwesịrị m ikweta na na mbụ amaghị m ihe mmelite nchekwa na-etinye ma ọ bụ ọbụlagodi otu esi emelite ngwugwu. Wụnye sọftụwia kachasị amasị m bụ ahụmịhe nke, ọ bụ ezie na-asụ ngọngọ, mere ka m nwee mmetụta nke afọ ojuju zuru oke mgbe m hụrụ windo ahụ na mmemme nke were m (oge ụfọdụ obere, mgbe ụfọdụ ogologo oge) iji hazie ọsọ na isi ihuenyo.
N'oge na-adịghị anya amalitere m ịchọpụta na enweghi m ahụmịhe, amalitere m ịwụnye ọtụtụ narị nkwụnye ego, faịlụ, mmemme, wdg, wdg. Ya mere, otu ụbọchị, agwara m onwe m, sị: "Taa, anyị ga - ehichapụ kọmpụta ahụ" (ọ bụghị na ọ dị nwayọ ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke a, ọ dị m ka ọ ga - aka mma ịnweta ya n'ihe ole na ole m na - agaghịzi ebi eji). Mgbe awa ole na ole nke nhicha ahụ amalitere m ịmara na enwere ọtụtụ ihe karịa ihe m tinyere na mbụ, mmemme na ngwugwu nke m na-amaghị maka ọrụ ha na ọkachasị ihe kpatara ha ji nọrọ na sistem m.
Ka m chọpụtachara ozi ọma ahụ, ọ na-esiri m ike ịmata ihe mere m ji na-achọ ihe ndị ọzọ m ga-achọpụta. N'ụzọ dị otú a, amalitere m ịgụ banyere ụdị nkesa Linux dị iche iche n'ebe ahụ. N'oge na-adịghị anya, aha ndị dị ka Fedora, SUSE, CentOs agabigawo n'anya m ... ndepụta ahụ wee na-aga n'ihu ruo mgbe m chọtara otu nke dọọrọ uche m ... Njiko Linux ...
Arch Linux bu nkesa ghasara uche m ... Rolling Hapụ… Ọ bụ otu n’ime ihe mbụ dọọrọ mmasị m. Nke abụọ bụ nkà ihe ọmụma Kiss. N'oge na-adịghị anya, amalitere m nrọ banyere ya, inwe ike ịmepụta sistemụ m site na opekempe, ịmara nke ọma ihe m nwere na ịnwe ihe m chọrọ, na-enweghị mmemme ndị ọzọ, na-enweghị ntọala ọzọ. Ekwesịrị m ikweta na enwere m ike dị obere n'oge ahụ, n'eziokwu na m nọ na Linux ọnwa ole na ole, mana echere m na agaghị m enwe ike ijide nrụnye njikwa. Egwu meriri m wee kpebie ịchọ ihe dị mfe.
Nrọ m mezuru mgbe m hụrụ Manjaro
Isi nke abụọ, Manjaro:
Maka onye ọ bụla mara isiokwu a, Manjaro bụ otu n'ime nkesa ndị na-elekwasị anya n'iwebata ndị ọrụ kachasị ọhụrụ nke Linux ụwa nso na gburugburu Rolling Release gburugburu nke Arch Linux. Gburugburu ya na ngwa ya nwere nhọrọ dịgasị iche iche nke mmemme nke na-eme ka ndụ dịrị onye ọrụ ọ bụla mfe ma kwe ka ha mara nke ọma pacman, Njikwa ngwugwu Arch.
Anọ m na-eji Ubuntu ihe karịrị ọnwa anọ, m kpebiri iso Manjaro. Agwara m onwe m: "Ọ bụrụ na ị nwere ike ijikwa nke a, ị ga-abịarukwu nso ịwụnye Arch na laptọọpụ." Ọ bụ ahụmịhe bara ụba, enwere m ike ịmụ etu esi edozi ụdị kernel (ma chọpụta ihe kernel bụ) ebe a. Enwere m ike ịwụnye ọtụtụ ngwugwu ọhụrụ ma mụta ọtụtụ ihe banyere nhazi na obere opekata mpe nke usoro chọrọ ịkọ. N'otu oge ahụ, amalitere m iji usoro mebere Arch arụ ọrụ na igwe na-enweghị atụ. Followinggbaso nwụnye ndu na mgbe ụfọdụ online nkuzi leta oro. Na ntabi anya, emere m ya, ihe echichi zuru ezu na laptọọpụ m.
Isi nke atọ, Arch:
Echichi mbụ m nwere ọtụtụ ihe ndọghachi azụ, amatabeghị m ọtụtụ ihe banyere ụwa Linux, mana opekata mpe enweela m obere ahụmihe na isiokwu a. Ọ jisiri ike wụnye usoro ndị ọzọ tụlere siri ike na m ihe ịga nke ọma na m na-anwa nke abụọ (nke mbụ bụ na igwe m gbaziri si ụlọ akwụkwọ sekọndrị). N'oge na-adịghị anya mgbe m kpebiri itinyegharị sistemụ m, ọ dị m ka ọ ka nwere ọtụtụ ihe m nwere ike ịhazi karịa, ma ọ bụ wụnye nke ọma. Ka oge na-aga, achọpụtara m ole na ole nchịkọta m chọrọ iji rụọ ọrụ laptọọpụ m, enwere m obi iru ala na ọdụ, iwu, na ebe faịlụ.
Ihe niile na-aga nke ọma rue otu ụbọchị, mgbe m na-achọgharị na ịntanetị, ahụrụ m ihe onyonyo nke kpaliri ọchịchọ m ịmata ihe ...
Gịnị bụ ihe a? Enwere ihe dị elu karịa Arch Linux? Gentoo? Linux Site na ịcha? ... Ọchịchọ m na-akpọ oku ọzọ. Kpebisie ike karịa mgbe ọ bụla ịmalite ihe ịma aka ọhụrụ a.
A ọhụrụ isi, Gentoo:
Ihe mbụ ị ga - ahụ mgbe ị na - ekwu maka Gentoo bụ akwụkwọ, ọtụtụ akwụkwọ. Na Gentoo Wiki Ọ bụ ebe magburu onwe ya ebe ị nwere ike ịchọta ụdị ozi niile gbasara ọtụtụ puku mmemme na ntọala. Ma ihe kachasị mkpa bụ compendium jupụtara na ụkpụrụ ụlọ na usoro ndị a na-akpọ Akwụkwọ ntuziaka Gentoo.
Na Akwụkwọ Ntuziaka ị nwere ike ịchọta nzọụkwụ site na nkwụsị ihe niile ịchọrọ iji wụnye Gentoo site na ncha. Nkọwa zuru oke ma kọwaa n'ụzọ nghọta, akwụkwọ ntuziaka a na-akpọrọ gị site na ntọala Linux na ntọala nwụnye. Ekwesịrị m ikweta na m gbalịrị itinye nrụnye ahụ ogologo oge m nwere ike, na-eche na agaghị m enwe ike mezue ya, mana n'otu ngwụcha izu, jiri obi ụtọ na ụjọ na-atụ m, amalitere m ịmalite nrụnye ahụ ga-agbanwe m na-arụ ọrụ.
Usoro ahụ were m naanị ụbọchị abụọ (otu ụbọchị tupu ị gụọ ya na otu ụbọchị n'etiti mkpokọta na ntinye). M na-ekwu mkpokọta n'ihi na na Gentoo ị nwere ike ikpokọta mmemme gị niile kama ibudata nnomi ọnụọgụ abụọ, mana ọ dịka pacman, apt ma obu yum. Otu n'ime usoro kachasị dị ogologo bụ kernel, akụkụ nhazi, ịgụ nhọrọ, ịhọrọ ihe dị mkpa. Newwa ohuru nke ohere na ụdị mmebe nke gbanahụrụ nkesa ndị ọzọ niile m hụtụrụla ruo oge ahụ.
Site na usoro a, enweghị m ike ịgọnahụ na ọ bụ ihe ọhụụ ọhụụ ọhụụ ịhụ gburugburu desktọọpụ GNOME m na-agbanye na nke mbụ ya, na-emegharị oke m, ma hụ ihe niile m rụzuru na ọrụ m. Ihe a niile mere na Jenụwarị ma kemgbe ahụ enweghị m ike ịgọnahụ na ụbọchị ọ bụla m na-amụtakwu banyere nkesa a na-awụ akpata oyi n'ahụ, ekpebiri m ịnọ ebe a ruo ụbọchị m ga-akwụsị iji kọmputa.
Nke a bụ oge nke atọ m na-etinye laptọọpụ m na Gentoo site na ncha, na ntinye ọ bụla enwere m ike ị nwere ike ịhazi kọmputa m nke ọma, nweta ọtụtụ ngwaike m ma nwee ọ enjoyụ nke ịmara na akụrụngwa bụ nke m, yana na m bụ onye na-eme ka ọ rụọ ọrụ.
M na-agbalị wụnye Linux Site ọkọ (ọ bụ maa a kwesịrị maka m). Enwere m ike mezue ya ma gbanye ọdụ m, na-amara na agbakọtara m mmemme ọ bụla site na ncha, ma chịkọta ya site na ncha n'ime laptọọpụ m, ahụmịhe ọzọ dị ebube m ga-ekweta.
Linux site ọkọ
Mana ọ bụ n'oge a ka m chọtara ma mesie ike ihe kpatara m ga-eji nọrọ na Gentoo ma nọgide na-anụ ụtọ nkesa m.
A ngwa ngwa ile Gentoo:
Na ngwụsị nke njem a, ahọpụtala m Gentoo maka ihe ndị a:
Inwe obodo na-eme ka mmezi dị mfe:
Nke a ga-abụ eziokwu mgbe niile, Linux site na ncha bụ ihe magburu onwe ya, mana ọ gaghị ekwe omume ijikwa ya n'ụzọ dị mfe, obere ma ọ bụrụ na enwere nchekwa nchekwa, ma ọ bụ mgbe ịchọrọ ịnweta sọftụwia kachasị ọhụrụ na kọmputa gị.
Otu obodo na akwụkwọ:
Akwụkwọ Gentoo dị oke mma, ihe niile dị ebe, naanị ịgụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ya, ịnwere ike ịchọta onye ọ bụla na IRC maka ndụmọdụ. Ọtụtụ n'ime ha nwere omume enyi, ọ bụ ezie na ha anaghị ekwu ọtụtụ okwu, ọtụtụ n'ime ha nọ n'ọnọdụ iji nyere onye ọ bụla aka.
Nchịkọta na arụmọrụ:
Mgbe ị na-eji Gentoo, ị na-ewu ihe niile, na ihe niile bụ ihe niile. Mana ihe dị iche na Linux site na ncha bụ na mgbe ị wụnye ya, mmezi dị mfe. Ọdụ ụgbọ mmiri, Onye njikwa ngwugwu Gentoo, bara ụba nke ukwuu ma na-enye gị ohere ịhazi n'ihe niile (yana n'ụzọ dị mfe) njirimara nke mmemme ị wụnye. Nhazi a n'otu oge na-enye gị ohere ịpịpụta ihe kachasị na ngwaike kọmputa gị. Ọ bụrụ na laptọọpụ gị dị ugbu a na ọ naghị eji Gentoo, ọ na-efunahụ ọtụtụ ikike ya.
Ọ bụrụ n’ị meela nke a, enwere m olile anya na ị nweela obere ọ excitedụ maka ohere magburu onwe ya Linux na-enye ndị ọrụ ya. Ike ịmara akụrụngwa gị n'akụkụ ọ bụla, ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta ngwanrọ dị ka m, bụ otu n'ime ahụmịhe kachasị afọ ojuju ị nwere ike ịnweta. Ọ bụrụ na ọchịchọ ịmata ihe masịrị gị ịnwale ihe ọhụrụ, enwere m ike ịkwado Mee ya! Na-echeghị ogologo oge, na-etinyeghị buts, ma ọ bụrụ na ịnwetaghị ya na nke mbụ, nọgide na-anwa. N’oge na-adịghị anya, ị ga-amata ọtụtụ ihe ị mụtara ma chọpụta na usoro ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Linux Linux: Akụkọ banyere njem
Nhọrọ dị oke mma, mana aghọtaghị m ihe kpatara na ị na - ekwu na ọ bụ oge nke atọ ị rụnyere Gentoo, ọ bụrụ na sistemụ a nwere ike isi na otu diski gaa na nke ọzọ, nke m bụ ihe m mere mgbe m kpochapụrụ Windows kpamkpam wee gafere HDD niile ga ...
Gentoo bụ nhọrọ magburu onwe ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nsogbu ọ bụla edozilarị na webụsaịtị gọọmentị ma ndị ọzọ na-achọ enyemaka na kernel.
Njikwa Portage nke nchịkọta dị mma ... ị na-ezere ọtụtụ mkpọka ịdabere na gị n'ihi na ị kpebiri ụdị nke ị ga-eji na nkeji ikpeazụ.
Zaghachi J. Garcia
Ndewo J. Garcia, ọ dị mfe, ntinye mbụ m hapụrụ ọtụtụ nhọrọ na ndabara, ahọrọ m ka igwu ya ọfụma. Site na nke abụọ, enweelarị m ikike ịchịkwa ọdụ ụgbọ mmiri ma nwee ike itinye akara ọkọlọtọ USE kama nke ụwa maka mmemme ọ bụla m chọrọ. Maka oge nke atọ amalitere m ịrụ ọrụ na kernel m, na-ahapụ ndị ọkwọ ụgbọala nke kọmputa m agaghị eji rụọ ọrụ, yana imeziwanye arụmọrụ dị ka o kwere mee.
Enwere m mmasị ịmalite site na ncha n'ihi na oge nghazi ahụ malitere ịhapụ usoro izugbe, ọ masịrị m ịmụ otu esi ahazi ihe niile site na mmalite.
Anọ m na-eji Debian afọ 4 (na m na-eji nwa nkita na a mgbe), na ọ bụ Linux m na-eji kemgbe m chọpụtara Linux. Gentoo na-ada ihe na-atọ ụtọ, mana ọ nwere ike were ọtụtụ ahụmịhe karịa otu ụbọchị tinye ya nke ọma. xD
Zaghachi Joshua Beta
hahaha na obere oge ma ọ bụrụ na isiokwu ahụ nabatara nke ọma, ana m ekwe nkwa ịme obere nduzi nke kachasị mgbe ị na-etinye 😉 na obere omume ọ na-agbadata ihe dị ka akara 15 nke koodu karịa ma ọ bụ obere.
Ndewo, agụọla edemede a, ajụjụ a na - ebilite mgbe niile mgbe ị na - etinye nkesa linux, otu ụbọchị, m jụrụ otu onye ọrụ ibe m, onye nyere m ndụmọdụ, ọ gwara m ka m wụnye slackware, nkesa nkesa Linux siri ike, yana oke ohere nchịkọta na-emerụ, nke ahụ bụ ihe ọ gwara m ma hinted na ọ bụla nkesa na-eji precompiled sistemụ. mee elu mee ala, ha adaba. Eziokwu bụ na m gere ya ntị, ma ọ dịrịghị m mfe ijikwa sistemụ arụmọrụ a, m ga-achịkọta ihe niile, mana ọ bụ eziokwu na ọ naghị enye m ụdị njehie ọ bụla na nchịkọta na-arụ ọrụ mgbe niile, usoro ahụ anaghị mechie. ruo taa ọ ka na-arụ ọrụ. Banyere gentoo, ọ dịbeghị mgbe m jiri ya, ọ dị ka slackware?
Gentoo nwere mgbọrọgwụ na FreeBSD, ma ọ dịkarịa ala sistemụ nchịkọta ngwugwu ya, ihe eji eme ihe. Dị ka Linux site na ncha, Slackware bụ nkesa siri ike iji lekọta. Ọ bụrụ na naanị ị ga-agba ọsọ sava weebụ dị ka Apache, ma ọ bụ ikekwe onye nnọchianya, ha ga-abụ ezigbo nhọrọ iji tụlee, n'ihi na ịnwe mmemme ole na ole, a na-ebelata ngwa ọgụ ọgụ.
Mana maka kọmputa nkeonwe nke a adịghị mfe, onye ọ bụla chọrọ ka emelitere mmemme ha na ọkachasị, na usoro mmelite ahụ adịghị agwụ ike. Gentoo nwere Rolling Release system, na-enye ohere ịnweta sọftụwia niile emelitere site na mfe «emerge -avUD @world». Agegbọ mmiri ga-edozi ndabere niile na naanị n'okpuru ọnọdụ ndị na-adịghị adịkarị ka a ga-achọrọ ọrụ ọ bụla ọzọ.
Uru ọzọ bụ nkwado nchekwa anyị na-enye, (dị ka ọtụtụ obodo ndị ọzọ) ebe ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na sistemụ gị nwere ngwugwu nwere ọghọm mara site na "glsa-check" ...
Amaghị m otu obodo Slackware si arụ ọrụ, mana obodo ndị Gentoo na-arụsi ọrụ ike na mmepe, na-emezi ngwa ọrụ na usoro, na-agbasasị ịtụle.
N'ezie, Portage dị ka ọdụ ụgbọ mmiri FreeBSD, mana ma ọ bụghị Slackware bụ ihe kacha nso na BSD enwere ike ịchọta na nkesa Linux, belụsọ n'ezie ndị dịka Debian / BSD, Gentoo / BSD, wdg. Na Slackware na izizi siri ike nnweta ma ọ bụrụ na ị mụta otu o si arụ ọrụ ọ dị mfe.
Daalụ maka ịkekọrịta njem ahụ; ọ na-akpali akpali.
Ọ gaghị afụ ụfụ ma ọ bụrụ na n'oge ọzọ ị ga-egosipụtakwa ya n'ụzọ dabara adaba, na-egosi usoro ị ga-agbaso, ebe nzukọ ma ọ bụ vidiyo ntinye.
Otu ajụjụ: achọrọ ka ịmata bekee?
A sụgharịrị ntuziaka nwụnye n'ihe karịrị asụsụ 6 😀
Ozugbo enwere m obere oge, aga m amalite ide obere ntuziaka bara uru, ebe nke a bụ ọkwa mbụ m, enwere m mmasị ịkọ ntakịrị banyere ahụmịhe m wee hụ ma enwere m ndị nwere mmasị, ọbụlagodi na ọ bụ maka Otu m dị njikere karịa ịmalite. isi dee echichi nkuzi, ọ bụ ezie na ọ ga-adị nnọọ iche na ihe ị na-ahụ otu ugboro na ntuziaka 🙂
N’oge na-adịghị anya, m ga-arịgo ntakịrị karịa ya.
magburu onwe ya na SO na-eme m ọchịchọ ịmata
Zaghachi to renzo
Echere m na ọnwa ole na ole gara aga, adị m ka gị, m gbalịrị ịwụnye distros site na ncha, agbanyeghị oge na-adịwanye mkpụmkpụ, ọrụ ndị na-eme ka ịchọrọ iji oge ezinụlọ karịa, nwa m nwanyị emeela ka m chefuo ụzọ ndụ ahụ. , N'ime afọ m maara ntakịrị ihe banyere ụwa nke Gnu / Linux abịarutere m Archlinux nghọta na omimi ihe ọ bụ, amụrụ m banyere Rolling Release, KISS na m hapụrụ ịhapụ ịkwaga na Gentoo, enwere m olileanya na obere oge. iji mezuo ya, enwere m ASUS 0th ọgbọ nke oge ikpeazụ m kpebiri itinye Debian nwere nsogbu na kaadị vidiyo na netwọkụ ikuku, ihe ikpeazu esighi ike mana kaadị vidiyo bụ nsogbu iji jikọọ na ihuenyo ọzọ na / ma ọ bụ projector , SmarTV, agbanyeghị m ga-achọ ịnwale ya, a bụ m onye mmepe Python, onye nkuzi ụmụaka, onye ọchụnta ego na nna nwere nganga nke ezinụlọ.Enwere m olile anya inye onwe m ụbọchị ole na ole iji soro Gentoo.
Echere m na ọ bụ ihe dị ukwuu ị na-ekwu Statick 🙂 ọ dị mma mgbe niile inwe ihe ndị ka mkpa.
Site na ihe m nwere ike ịhụ na igwe gị ga - adị mma maka ndị na - arụ ọrụ dị ike nke Gentoo hụrụ ọtụtụ ntụgharị ihu n'anya, i7 m na - efe efe na Gentoo, mgbe ọ bụla m wụnye m na - ahụ CPU niile na 100%, nke ahụ bụ ihe m na - ahụtụbeghị na distro ọzọ . (100% bụ n'ihi na m na-agwa ya ka o jiri ike zoro ezo ya niile mgbe ị na-achịkọta mmemme ahụ, mana enwere m ike iji ihe ndị ọzọ dịka Virtualbox ma ọ bụ Chrome mgbe ị na-emelite)
Banyere Python, Portage nwere ike ịbụ maka gị onwe gị 😛 dịka edechara ya na Python, ọtụtụ n'ime mmemme ndị mepere emepe dịkwa na eke.
Ọ ga-abụrịrị ahụmahụ na-atọ ụtọ mgbe ị nwere ike ịwụli na Gentoo oo ma ọ bụrụ na m nwere ike inyere gị aka egbula oge ịjụ 🙂
Maka m Gentoo Linux bụ isi nkuku nke distros. Mgbe mgbalị 2 gwụsịrị na ọdịda m nwee ike ịwụnye ya na laptọọpụ m (nke atọ ọgbọ isi i5). N'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị nke nsogbu n'ihi enweghị nkwekọrịta na systemd na Gnome ejiri m ya. Mana echere m na ịdọ aka na ntị abụghị ihe efu, ebe ọ bụ na arụmọrụ ahụ dị ala karịa ihe m jiri na Arch Linux.
M na-eji Arch Linux na Gnome ugbu a, Anaghị m ahapụ olile iji Linux Linux na Gnome. Aghaghị m ịghọta ụfọdụ nkọwa metụtara ngwugwu masked na ma eleghị anya nkọwa ndị m na-adịghị atụle.
M ga-anwa ịwụnye Gentoo mgbe m nwere PC dị ike karị n'ihi na echere m na nke ahụ bụ kpọmkwem otu n'ime omume ọma nke distro a; nweta ọtụtụ ihe na ngwaike gị, ma ka ọ dị ugbu a
ebe ọ bụ na mkpokọta nke nchịkọta bụ ngwa ngwa.
Ọ ga-amasị m ka ị mee nkuzi banyere otu esi etinye Gentoo na Gnome, m ga-enwe ekele maka ya.
Akụkọ a masịrị m, ọ na-agba m ume ịwụnye Gentoo. Ka ahụ oge n'adịghị anya…
Ọ dị mma, ugbu a enwere m Gentoo na sistemụ na GNOME 🙂 ọ were m ntakịrị iji hazie, mana site n'ịgụ obere ọgụgụ ọ dị mfe 😉 n'oge na-adịghị anya m ga-amalite na isiokwu ahụ
Javier Gutierrez Street dijo
ndị ọma na nke ọhụrụ bụ ịnụ ụtọ ekele maka onyinye gị na-ekele
Zaghachi Javier Calle Gutierrez
Ihe dị mma ịkọrọ ya 🙂 na nke a, echiche a bụ ịkekọrịta GNU / Linux na uru ya niile ings ekele na ọ bụ ihe obi ụtọ ịkekọrịta ntakịrị ihe m nwere na Linux
Christopher, kedụ ezigbo akụkọ banyere njem gị, echere m na ọtụtụ n'ime anyị gabigala ndekọ yiri nke ahụ n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Abụghị m onye ọrụ Gentoo, ọkachasị m jiri distro ahụ ugboro ole na ole na kọmputa nke otu onye otu obodo, mana obi abụọ adịghị ya na isiokwu gị na ahụmịhe gị na-akpali m ịkwado mmalite nke kọmputa na Gentoo arụnyere.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka onyinye ị na-enye ndị obodo desdelinux, enwere m olile anya ịgụ gị oge a, yana ndị ọrụ ahụ chọrọ ịkọ ahụmịhe ha na ihe ọmụma ha.
Daalụ gị ngwere 🙂 ọ bụ ihe ọ pleasureụ ịnwe ike ịkọrọ ndị ọzọ ntakịrị nke ahụmịhe m ma si otú a gbaa ha ume ịnwale nkesa m hụrụ n'anya 🙂 yana iwu otu obere ndị na-asụ Spanish na Gentoo, n'ihi na enwere ndị si n'ọtụtụ akụkụ ụwa, mana ole na ole Latinos na Hispanics 🙂 ekele, n'oge na-adịghị anya m ga-enwe isiokwu ọzọ ịkọrọ 🙂
Achọrọ m ịwụnye Gentoo mgbe niile mana otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ enweghị m ike ịme ya mana mgbe m gụsịrị blog gị, echere m na oge eruola ka m gbanwee gaa Gentoo / Funtoo, chekwaa nke ahụ mbụ na-eme na VM haha.
I hu Funtoo amaghi m ma m ga ebe ahu ma obu tuo ya Gentoo
N'ezie m hụrụ Funtoo 😉 ka emechara, onye okike nke Gentoo guzobere Funtoo kwa 🙂-eme ihe n'eziokwu na m na mgbe wụnye ya, m nwere ọchịchọ na-aga n'ebe mgbọrọgwụ na otu ihe ahụ dị ka Manjaro na Arch, M họọrọ Arch maka ịbụ mgbọrọgwụ , mana anurum ezigbo ihe banyere Funtoo kwa 🙂 Banyere
N’oge na-adịghị anya, enyi yoyo ahụ ga-eme ọkwa gafere igwe mmadụ n’ihi na ọ dị mma
Zaghachi Michael Stevens
haha Aghọtaghị m nke ọma, echere m na ọ ga-abụ maka onye nyochagharị, ma ọ bụ ikekwe n'ihi na m si Spain (ebe a na Peru anyị anaghị eji "dị mma") mana ọ ga-adị mma ịnwe ọtụtụ mmadụ Obodo Gentoo 🙂 ọkachasị ma ọ bụrụ na ha na-asụ Spanish.
Echere m na isiokwu ahụ dị mma, enwere m mmasị na ụwa LINUX, n'ihi na enwere m nnwere onwe, ọ bụ nkà ihe ọmụma nke "Mee ya n'onwe gị", "Mee ya dịka ị kacha amasị gị", "Mee ya na obodo", na nnwere onwe ime ihe n'ụzọ anyị dị mma nke ukwuu. Ihe na-amasị m bụ na enwere distros nke na-esite na nke kachasị mfe na nke kachasị dị mgbagwoju anya, maka ụdị ụtọ dị iche iche.
Daalụ nke ukwuu 🙂 ị ziri ezi, ịma mma nke ihe a niile bụ na onye ọ bụla hụrụ ihe kacha amasị ha ma nwee nnwere onwe mgbe ha na-eji ya. Ekele 🙂
Nwetara m achọ ịma! I meela ka obi gbawa m obi hahaha
Anọ m na-agbapụ na Gentoo ruo ihe karịrị otu afọ, abụ m onye ọrụ Bunsen Labs, agabigala m ọtụtụ distros, emechaala m draịva abụọ siri ike site na ịwụnye ọtụtụ. Eziokwu bụ na edemede gị kpaliri m nke ukwuu wee mee ka m teta ọkụ ahụ iji nwaa ọzọ, oge ikpeazụ m mere ya, m nọrọ na nhazi netwọkụ, ebe ọ bụ na enwere m nsogbu na kaadị netwọkụ m: /
Achọrọ m inye ya ọzọ na ngwụcha izu a 😀
Daalụ n'ezie maka biputere nke a, ọ bụ na-akpali akpali, ọ bịara na nnukwu oge!
I meela nke ukwuu maka okwu gị 🙂 ọ bụrụ na kaadị gị na-enye nnukwu nsogbu, gbalịa ịwụnye ya na sistemụ gị, ihe niile ahaziela 😉 nke ga - enyere aka lot
Achọghị m ya maka ya na mbido, mana na ngwụcha ọ bụ akụkọ dị mma ma na-atọkwa ụtọ.Ma ọ masịrị m Gentoo, mana nke bụ eziokwu bụ na emetụghị m ya aka ọtụtụ afọ. Enwere m ya arụnyere nwa oge rue mgbe m zutere Arch n'oge Judd Vinet na-eduzi distro a, ọ nwere akara ngosi A na-acha anụnụ anụnụ na ọkara gbagọrọ agbagọ "Judd Vinet malitere Arch Linux na Machị 2002", echetara m oge ndị ahụ na Enwere m ike ịbụ akụkụ nke ọganihu gị na Arch taa. Eleghi anya otu ụbọchị, m ga-enwe Gentoo ọzọ ma echere m na isiokwu gị kpaliri m ịme ya n'oge na-adịghị anya. Eziokwu bụ na otu ihe na-enye m nsogbu gbasara Gentoo bụ na ebughi ụzọ chịkọta ngwungwu ha ka nke Arch ma naanị ime kernel melite nwere ike iwe gị ogologo oge ime ya, oge na elekere mgbe ọ dị ka ọ dị. chịkọtara kernel na ngwugwu mmelite ndị ọzọ, na-eburu n'uche na n'oge ahụ anyị enweghị njikọ brọdbandị anyị nwere taa na ịntanetị niile dị nwayọ nwayọ. Abụghị m onye nrụpụta ngwanrọ, mana oge ụfọdụ, m ga - abụrịrị onye nrụpụta web, ọ na - amasị m na nchekwa kọmputa, sistemụ arụmọrụ na nsogbu ọgbara ọhụrụ. Kemgbe m zutere Linux ụwa m họọrọ ka m jiri ma mụọ banyere sọftụwia na-akwụghị ụgwọ na ndị ọzọ OpenSource. Ana m ekele gị nke ukwuu maka onyinye gị, ọ ga-amasị m ịdekọ. Ekele si Bogotá Colombia.
Zaghachi Nelson Fonseca
Ndewo Nelson 🙂 ọ bụ eziokwu, taa ọ ga-ekwe omume iji Gentoo, ọkachasị na ngwa ọgbara ọhụrụ, ohere ịpịpụta ihe kachasị na ngwaike bụ ihe na-adọrọ adọrọ 🙂 na n'ezie, isonye na ọrụ FOSS bụ ihe na-atọ m ụtọ otutu, ekwenyesiri m ike na m ga-enwe ike ibunye ihe karịrị otu iji rụkọta ọrụ na ndị a, ọbụlagodi na ha bụ obere ihe is Ọ na-atọ m ụtọ ịkekọrịta na n'ezie ha ga-ahụ m ebe a ma ọ bụ nke ọma, ebe ịntanetị na-esonye anyị 🙂 Ekele
Lee anyaụfụ! 😉
Ọ bụ ezie na amaara m ya kemgbe ọtụtụ afọ, m na-eji GNU / Linux naanị ihe karịrị otu afọ (Debian, naanị ya na isi ihe) ma enwere m mmasị njem ị na-agwa m n'ihi otu o si echetara m nke ụzọ m setịpụrụ maka onwe m, dị ka nke a ka m ga-agbaso usoro isiokwu a na nnukwu mmasị na kedu ka m nwere laptọọpụ iji wụnye, gịnị kpatara Gentoo?
Enwere m nnọọ mmasị ịhụ mmalite na gburugburu ebe oyiyi ahụ dị maka nkesa, ị ga-enwe njikọ ahụ n'aka?
Doro anya! Gentoo nwere ike ịbụ nhọrọ gị ọzọ 😉 ọ dị nwute na enweghị m ike ịchọta isi mmalite banyere onyonyo a, ọ dị ka ọ bụ otu n'ime ihe omimi ịntanetị ahụ gbasaa ọsọ ọsọ nke na ọ nweghị ebe mmalite ... Ma ọ bụrụ na achọtara m ya , Amaara m ebe m ga-etinye URL 😉 Greetings
Ekele Chris, magburu onwe ya ihe ị na-ekwu, m na-eji Linux afọ 3 ma anaghị m ahapụ ya n'efu, enwere m Archlinux, deepin na KaOS, ihe dị ka otu afọ m nwara ịwụnye Gentoo, na-agbaso usoro a https://rootsudo.wordpress.com/2014/09/14/manual-casi-facil-para-instalar-gentoo-paso-a-paso/ dị nwute na m furu efu ma hapụ ya naanị, enwere olile anya na ị nwere ike bulite nkuzi iji wụnye Gentoo, Ekele na ịga n'ihu
Zaghachi Carlos AM
Ihe nkuzi a na - apụta n’oge adịghị anya 🙂 n’ezie ọ bara uru ịnwe Akwụkwọ Ntuziaka aka iji nwee ike ịjụ nsogbu ọ bụla nwere ike ibilite na usoro a 🙂 M nwere ike ikwu na ị ga - eme ya site na distro nke edozigharịrị, ya mere, ọtụtụ n’ime nhazi nke mbu di nfe. M wụnye Gentoo m Arch nkebi mgbe ọ bụla m chọrọ 🙂 ekele na jisie na echichi n'ọdịnihu
Isiokwu ahụ na-adọrọ mmasị, amaghị m ihe siri ike karị ma ọ bụrụ na ịwụnye Gentoo ma ọ bụ wụnye FreeBSD, yana sistemụ ahụ nke na-achịkwa usoro ahụ dum, na linux / gnu enwere usoro ole na ole na-enweghị usoro, otu onye n'ime ha bụ gentoo, Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghị m mmasị na ya.
Zaghachi na qpro
Ọfọn, ahapụbeghị m CLI na FreeBSD yabụ ahụbeghị m gburugburu desktọọpụ ya, mana ịgwa eziokwu na usoro ahụ dịịrị m mfe ... opekata mpe enwere onye nrụnye na-agwa gị ihe ị ga-eme na usoro ọ bụla na FreeBSD Ọfọn, Amaara m na ọ bụ ihe gbasara oke dị na Gentoo, ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ihe niile, nke ahụ gụnyere usoro init 🙂
Alfredo M. dijo
Kemgbe ogologo oge, Gentoo na-adọrọ uche m. Adị m onye ọrụ Linux maka ihe karịrị afọ 15, ma ugbu a ka m nọ. Ekele na ekele na njem a, njem magburu onwe ya maka ịmata ihe na ihe ọmụma.
Zaghachi Alfredo M
Nwannem, ekele m gi nke oma. Isiokwu ya na-akpali ndị dị mma na ndị kachasị mma.
Min: Nchọgharị weebụ nke nwere ọgụgụ isi, ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma